Shiinaha Solid Frame Double kumbyuutarradeedu Mechanical Press (taxane ah STE) warshad iyo shirkado | Daya
Qalafsanaan sare (isbeddel) jirka iyo isdabajoogga 1/8000: cillad yar iyo waqtiga haynta saxnaanta dheer.
Isticmaal bareeg xajin xajin ah oo qoyaan leh (nooca isku dhafan): ilaalinta deegaanka, wasakheyn la'aan, buuq yar, nolol dheer.
Slider wuxuu qaataa dariiqa jihada afar gees iyo sideed geesood ah, kaas oo qaadi kara culeys weyn oo dabacsan si loo hubiyo muddada dheer iyo xasilloonida dayactirka saxnaanta shaabadda.
Jidka tareenka "Slider guide" wuxuu qaadanayaa "daminta-soo-noqnoqda badan" iyo "geeddi socodka shiidi tareenka", oo leh waxyar oo duug ah, saxnaan sare leh, waqtiga haynta saxnaanta dheer, iyo nolosha caaryada oo hagaagtay
Adeegso aaladda saliida khafiifka ah ee saliidda saliidda: keydinta tamarta, ilaalinta deegaanka, oo leh shaqo digniin otomaatig ah, waxay kordhin kartaa tirada shaabadda adoo hagaajinaya mugga saliidda.
Gacanta naxaasku waxay ka samaysan tahay tin-fosfooras naxaas ah ZQSn10-1, oo xooggiisu ka 1.5 jeer ka sarreeyo kan naxaasta caadiga ah ee BC6. Waxay qaadataa aalad aad u xasaasi ah oo ka hortagga culeyska korontada, taas oo si wax ku ool ah u ilaalin karta nolosha adeegga feerka oo dhinta.
Jaangooyada Jabbaan SMC ee nidaamisa waalka, saliidaha, miiraha hawada.
Jaangooyooyinka Jaangooyada NSK ee caadiga ah iyo shaabadda Japan ee NOK.
Qaabeynta caadiga ah ee shaashadda taabashada Jarmalka ee Siemens iyo Siemens motor.
DAYA dhinac toosan double press crank punch press
Dhinacyada kale ee toosan ee riixa labarood
Daya press: oo leh sagxad iyo xayndaabka nabadgelyada, oo ku habboon dayactirka xajinta iyo isbeddelka saliidda qaboojinta, suunka ugu weyn ee mashiinka ayaa dabacsan oo si sahlan loo hagaajin karo, oo ku habboon dayactirka xiga. Ammaan badan oo ku habboon.
Saxaafad kale:Iyadoon madal dayactir lahayn. Dayactirka xajinta, beddelka saliidda qaboojinta, hagaajinta dabacsan ee suunka gawaarida, iwm. Taas oo kaliya lagu dhammaystiri karo gargaarka forklift, oo aan ku habboonayn dayactirka iyo dayactirka xiga. Waxaa jira khataro nabadgelyo oo iman kara.
Daya press: Daya press waxay qaadatay afar gees iyo sideed dhinac si ay u hareereyso tareenka hagida. Meesha shaabad lagu samaynayo, tareenka hagida tareenka waxaa ku jira dhammaan tusayaasha hagidda ee miiska saaran. Nooca tareenka hagaha wuxuu leeyahay astaamaha saxnaanta shaabad sarreysa, awoodda culeyska culeyska lidka ku ah eccentric, xirashada tareenka yar iyo waqtiga haynta saxda ah ee saxda ah.
Saxaafad kale:tareenka hagaha oo leh qaab dhismeed qayb ahaan u lifaaqan sida ku cad sawirka saxda ah ayaa la qaatay. Inta lagu jiro howsha shaabbinta, waxaa jira qayb ka mid ah tareenka hagaha oo la soo saaray. Inta lagu guda jiro howsha shaabbadda, tareenka hagaha slide waa sahlan yahay in la janjeero, iyadoo la fiirinayo awoodda culeyska eexasho liidata, xirashada tareenka weyn, waqtiga haynta saxda ah ee gaaban iyo qiimaha dayactirka sare.
Daya press: masaafada udhaxeysa labada qodob ee adeegsiga xoogga waa in kabadan 60%; Faa'iidooyinka: weynaanshaha masaafada udhaxeysa labada qodob ee dalabka xoog, waxaa sii weynaanaya awoodda dhalista cimilada; inta ay le'egtahay masaafada udhaxeysa labada qodob ee dalabka xoog, ayaa sare usii kacaya qiimaha naqshadeynta.
Saxaafad kale:masaafada u dhaxeysa labada dhibic guud ahaan waa in ka yar 50%; Faa'iido darrooyinka: masaafada yar ee u dhaxeysa labada qodob ee xoogga lagu adeegsado, ayaa yareysa awoodda dhalista dhuxusha. Xadiidka tareenka waa sahlan tahay in la janjeero, wadada hagistu way fududahay in la xidho, saxsanaanta tareenka hagaha ayaa liita.
Daya press: nidaamka wareejinta saliida khafiifka ah ee qasabka ah, keydinta tamarta, dib ayaa loo isticmaali karaa, waxqabadka kuleylka kuleylka ayaa wanaagsan, marka la barbardhigo saliidda dufanka waxaa lagu kordhin karaa 5-10 garaac daqiiqaddii.
Saxaafad kale: bamka dufanka korontada ku shaqeeya, dufanka dib looma isticmaali karo, wax faa'iido ah uma lahan nidaamka wareejinta saliida dhuuban ee qasabka ah.
Daya press: marka dhererka istarooggu isku mid yahay, nidaamka wareejinta saliidda dhuuban ee qasabka ah wuxuu leeyahay waxtarka sare, marka la barbardhigo saliidda dufanka, waxay kordhin kartaa 5-10 garaac daqiiqaddii. Si adag u raac jaangooyada JIS heerka 1; heerka JIS ee heerka 1aad ayaa ka sarreeya heerka Taiwan CNS heerka 1.
Saxaafad kale:bamka dufanka korontada ku shaqeeya, dufanka dib looma isticmaali karo, faa'iidooyinka nidaamka wareejinta saliida oo qasab ah ma leh. sida laga soo xigtay Taiwan CNS heerka 1 heerka
Hagaha slide ee Daya punch press
Tilmaamaha kale ee isdabajoogga ee feer
Wadada tareenka ee Daya Punch press
Habka deminta soo noqnoqoshada 1.High: adkaanta kor ku xusan hrc48;
2. Habka shiidan ee tareenka hagaha: dhammaadka dusha sare wuxuu gaari karaa ra0.4-ra0.8 (dusha sare ee muraayadda), fidnaan, isbarbar dhig iyo taagnaan gudaha 0.005mm / ㎡.
Qalabka mashiinku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka duugga yar, saxsanaanta sare, waqtiga dayactirka saxnaanta dheer, nolosha adeegga muddada dheer iyo isticmaalka tamarta yar.
Jidka kale ee hagaha saxaafaddageedi socodka deminta; qashin-qodista, qallafsanaanta dusha sare ra1.6-ra3.2, fidnaan, isbarbaryaac, isku dheelitirnaan ka badan 0.3mm / ㎡
kale crankshafts saxaafadda
Daya feed press: crankshaft wuxuu ka samaysan yahay daawaha xoogga sare ee 42CrMo Faa'iidooyinka: xooggu waa 1.3 jeer ka sarreeyaa kan birta ah ee 45, nolosha adeeggu way dheer tahay, iska caabbinta dharku way wanaagsan tahay, duugistu way yar tahay, saxsanaantaana waa la ilaaliyaa muddo dheer.
Saxaafadaha kale: oo ka samaysan 45 bir, Faa'iido-darrooyin: qiimo jaban ， xoogga iyo iska caabbinta aan la barbar dhigi karin 42CrMo
Qaabka saliida ee DAYA feedhka PRESS: Φ 8 waxaa loo adeegsadaa dhuumaha saliidda ee cadaadiska saliidda.
Faa'iidooyinka: dhuumaha dhaadheer, dhexroor weyn ma fududa in la xannibo, la jebiyo, la hubiyo badbaadada saliidda saliidda, si siman.
Saxaafadaha kale: dhuumaha saliidda ee saliidda ee saliidda ayaa korsanaya Φ 6.
Hore: Toosan Side Servo Press (taxanaha STP)
Xiga: Toosan Dhinaca Farsamada ee Farsamada (taxanaha STF)
Toosan Side Speed ​​Speed ​​Press Waayo Motor Stator ...
Noocyada 'STC Series C' 'Fur Labaad Wiish Cran ...
STX taxane C Frame Single Crank Mechanical Press